Goormaa laciyaari doonaa finalka UEFA Champions league & saacada %
Goormaa laciyaari doonaa finalka UEFA Champions league & saacada
Dagaalka loogu jiro koobka kooxaha Yurub ee UEFA Champions league ayaa galay heerkiisii ugu dambeyay waxaana hadda la joogaa finalka tartankan oo ay laba kooxood oo Egland ahi iskugu soo hareen markii ugu horaysay tan iyo 2008 kii.
Goormaa la qabanayaa finalka Champions League
Halkee lagu qabanayaa finalka
Sidee ayaan u la socon karaa finalka Champions League
Wax walba oo ku saabsan finalka Champions League waxaad kala socon doontaa Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixinada hordhaca u ah kulanka finalka. Taariikhda labada kooxood iyo koobka la ahaantiisa. Maalinta finalka si qoraal toos ah ayaan idiin kula socodsiin doonaa natiijada ciyaarta.
Immisa taageerayaal ayaa garoonka soo xaadiri doona
Tikidhada sidee loo qeybsaday
Miyaa la isticmaali doonaa muuqaal caawiyaha garsooraha VAR
Hordhaca:Velencia VS Arsenal kulanka lugta labaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Europa League
CAJIIB: Muxuu kaga Dhigan Yahay Sedexleydii Lucas Moura Ka Dhaliyay Ajax Taariikhda Champion- League